FlorinCoin စျေး - အွန်လိုင်း FLO ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို FlorinCoin (FLO)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ FlorinCoin (FLO) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ FlorinCoin ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
Market ကဦးထုပ်: $5 195 497.00
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ FlorinCoin တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
FlorinCoin များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
FlorinCoinFLO သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.0287FlorinCoinFLO သို့ ယူရိုEUR€0.0241FlorinCoinFLO သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.0218FlorinCoinFLO သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.0261FlorinCoinFLO သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr0.257FlorinCoinFLO သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.0.18FlorinCoinFLO သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč0.635FlorinCoinFLO သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł0.107FlorinCoinFLO သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.0382FlorinCoinFLO သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.0396FlorinCoinFLO သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$0.642FlorinCoinFLO သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$0.222FlorinCoinFLO သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$0.153FlorinCoinFLO သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹2.15FlorinCoinFLO သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.4.83FlorinCoinFLO သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.0392FlorinCoinFLO သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.0429FlorinCoinFLO သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿0.891FlorinCoinFLO သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥0.199FlorinCoinFLO သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥3.03FlorinCoinFLO သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩33.94FlorinCoinFLO သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦10.86FlorinCoinFLO သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽2.1FlorinCoinFLO သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴0.794
FlorinCoinFLO သို့ BitcoinBTC0.000002 FlorinCoinFLO သို့ EthereumETH0.00007 FlorinCoinFLO သို့ LitecoinLTC0.000485 FlorinCoinFLO သို့ DigitalCashDASH0.000286 FlorinCoinFLO သို့ MoneroXMR0.000302 FlorinCoinFLO သို့ NxtNXT2.08 FlorinCoinFLO သို့ Ethereum ClassicETC0.00404 FlorinCoinFLO သို့ DogecoinDOGE7.96 FlorinCoinFLO သို့ ZCashZEC0.0003 FlorinCoinFLO သို့ BitsharesBTS1.1 FlorinCoinFLO သို့ DigiByteDGB1.04 FlorinCoinFLO သို့ RippleXRP0.0944 FlorinCoinFLO သို့ BitcoinDarkBTCD0.000967 FlorinCoinFLO သို့ PeerCoinPPC0.101 FlorinCoinFLO သို့ CraigsCoinCRAIG12.79 FlorinCoinFLO သို့ BitstakeXBS1.2 FlorinCoinFLO သို့ PayCoinXPY0.49 FlorinCoinFLO သို့ ProsperCoinPRC3.52 FlorinCoinFLO သို့ YbCoinYBC0.00002 FlorinCoinFLO သို့ DarkKushDANK9 FlorinCoinFLO သို့ GiveCoinGIVE60.76 FlorinCoinFLO သို့ KoboCoinKOBO6.29 FlorinCoinFLO သို့ DarkTokenDT0.0264 FlorinCoinFLO သို့ CETUS CoinCETI81